1. ချိန်းရှယ်ယာ 2RR.F အွန်လိုင်း
Raging River Exploration Inc. 12.51 € 12.50 € 12.85 € 12.80 € -0.513 % ↓
2. ချိန်းရှယ်ယာ 600519.SS အွန်လိုင်း
Kweichow Moutai Co., Ltd.2001.01 ¥ 1 952 ¥2010.82 ¥ 1 965 ¥ -0.506 % ↓
3. ချိန်းရှယ်ယာ AAIGF အွန်လိုင်း
4. ချိန်းရှယ်ယာ AAPL အွန်လိုင်း
Apple Inc. 159.46 $ 158.77 $ 159.46 $ 159.20 $ -2.043 % ↓
5. ချိန်းရှယ်ယာ ABBV အွန်လိုင်း
6. ချိန်းရှယ်ယာ ABT အွန်လိုင်း
Abbott Laboratories 120.98 $ 119.74 $ 123.17 $ 120.44 $ -0.306 % ↓
7. ချိန်းရှယ်ယာ ACGBY အွန်လိုင်း
8. ချိန်းရှယ်ယာ ACN အွန်လိုင်း
Accenture plc 333.36 $ 333.36 $ 333.36 $ 333.36 $ -1.314 % ↓
9. ချိန်းရှယ်ယာ ADBE အွန်လိုင်း
Adobe Systems Incorporated 508.94 $ 485.72 $ 513.23 $ 493.05 $ +1.599 % ↑
10. ချိန်းရှယ်ယာ ALIZF အွန်လိုင်း
11. ချိန်းရှယ်ယာ AMAT အွန်လိုင်း
12. ချိန်းရှယ်ယာ AMD အွန်လိုင်း
Advanced Micro Devices, Inc. 102.60 $ 102.60 $ 102.60 $ 102.60 $ -8.548 % ↓
13. ချိန်းရှယ်ယာ AMGN အွန်လိုင်း
14. ချိန်းရှယ်ယာ AMT အွန်လိုင်း
15. ချိန်းရှယ်ယာ AMZN အွန်လိုင်း
Amazon.com, Inc.2796.65 $2792.74 $2796.65 $2794.19 $ -0.578 % ↓
16. ချိန်းရှယ်ယာ ANTM အွန်လိုင်း
17. ချိန်းရှယ်ယာ ASML အွန်လိုင်း
ASML Holding N.V. 664.80 $ 631.40 $ 665 $ 634.66 $ +3.019 % ↑
18. ချိန်းရှယ်ယာ AVGO အွန်လိုင်း
Broadcom Inc. 569.72 $ 541.03 $ 570.26 $ 542.31 $ +2.808 % ↑
19. ချိန်းရှယ်ယာ AXP အွန်လိုင်း
20. ချိန်းရှယ်ယာ AZNCF အွန်လိုင်း
21. ချိန်းရှယ်ယာ BA အွန်လိုင်း
22. ချိန်းရှယ်ယာ BABA အွန်လိုင်း
Alibaba Group Holding Limited 111.78 $ 111.72 $ 111.94 $ 111.79 $ -0.658 % ↓
23. ချိန်းရှယ်ယာ BAC-PL အွန်လိုင်း
24. ချိန်းရှယ်ယာ BACHY အွန်လိုင်း
25. ချိန်းရှယ်ယာ BBD.BA အွန်လိုင်း
26. ချိန်းရှယ်ယာ BBL အွန်လိုင်း
27. ချိန်းရှယ်ယာ BBV.BA အွန်လိုင်း
28. ချိန်းရှယ်ယာ BHP အွန်လိုင်း
29. ချိန်းရှယ်ယာ BKNG အွန်လိုင်း
30. ချိန်းရှယ်ယာ BLK အွန်လိုင်း
BlackRock, Inc. 787.96 $ 787.96 $ 787.96 $ 787.96 $ -2.454 % ↓
31. ချိန်းရှယ်ယာ BML-PJ အွန်လိုင်း
32. ချိန်းရှယ်ယာ BMY အွန်လိုင်း
33. ချိန်းရှယ်ယာ BMYMP အွန်လိုင်း
34. ချိန်းရှယ်ယာ BNPQF အွန်လိုင်း
35. ချိန်းရှယ်ယာ BNS အွန်လိုင်း
36. ချိန်းရှယ်ယာ BPAQF အွန်လိုင်း
37. ချိန်းရှယ်ယာ BRK-B အွန်လိုင်း
38. ချိန်းရှယ်ယာ BSU.F အွန်လိုင်း
BP PLC ADR/6 DL -,25 28.20 € 28.20 € 28.60 € 28.60 € -2.055 % ↓
39. ချိန်းရှယ်ယာ BTI အွန်လိုင်း
40. ချိန်းရှယ်ယာ BTL.SG အွန်လိုင်း
BT Group plc 73.82 € 73.82 € 75.22 € 75.22 € +0.858 % ↑
41. ချိန်းရှယ်ယာ BUD အွန်လိုင်း
Anheuser-Busch InBev SA/NV 64.41 $ 63.44 $ 64.73 $ 63.79 $ -0.328 % ↓
42. ချိန်းရှယ်ယာ BYDDF အွန်လိုင်း
BYD Company Limited 32 $ 30.30 $ 32.17 $ 30.80 $ +1.399 % ↑
43. ချိန်းရှယ်ယာ C အွန်လိုင်း
Citigroup Inc. 64.15 $ 64.15 $ 64.15 $ 64.15 $ -2.195 % ↓
44. ချိန်းရှယ်ယာ CAT အွန်လိုင်း
Caterpillar Inc. 211.88 $ 211.85 $ 212.42 $ 212.26 $ -1.967 % ↓
45. ချိန်းရှယ်ယာ CHDRF အွန်လိုင်း
46. ချိန်းရှယ်ယာ CHTR အွန်လိုင်း
47. ချိန်းရှယ်ယာ CICHF အွန်လိုင်း
48. ချိန်းရှယ်ယာ CIHKY အွန်လိုင်း
49. ချိန်းရှယ်ယာ CILJF အွန်လိုင်း
50. ချိန်းရှယ်ယာ CMCSA အွန်လိုင်း
51. ချိန်းရှယ်ယာ CMWAY အွန်လိုင်း
52. ချိန်းရှယ်ယာ COP အွန်လိုင်း
53. ချိန်းရှယ်ယာ COST အွန်လိုင်း
54. ချိန်းရှယ်ယာ CPALL-R.BK အွန်လိုင်း
CP ALL Public Company Limited 59.50 ฿ 58.75 ฿ 59.75 ฿ 59 ฿ +1.288 % ↑
55. ချိန်းရှယ်ယာ CRM အွန်လိုင်း
56. ချိန်းရှယ်ယာ CSCO အွန်လိုင်း
Cisco Systems, Inc. 55.51 $ 54.40 $ 56.53 $ 54.62 $ +1.317 % ↑
57. ချိန်းရှယ်ယာ CTM.F အွန်လိုင်း
China Mobile Limited 5.85 € 5.84 € 5.95 € 5.86 € +0.584 % ↑
58. ချိန်းရှယ်ယာ CVS အွန်လိုင်း
59. ချိန်းရှယ်ယာ CVX အွန်လိုင်း
60. ချိန်းရှယ်ယာ DE အွန်လိုင်း
61. ချိန်းရှယ်ယာ DGEAF အွန်လိုင်း
62. ချိန်းရှယ်ယာ DHR အွန်လိုင်း
63. ချိန်းရှယ်ယာ DIS အွန်လိုင်း
The Walt Disney Company 135.07 $ 134.02 $ 137.91 $ 135.42 $ -1.326 % ↓
64. ချိန်းရှယ်ယာ DTEGF အွန်လိုင်း
65. ချိန်းရှယ်ယာ EADSF အွန်လိုင်း
66. ချိန်းရှယ်ယာ EL အွန်လိုင်း
67. ချိန်းရှယ်ယာ ENB-PJ.TO အွန်လိုင်း
68. ချိန်းရှယ်ယာ ENB-PP.TO အွန်လိုင်း
69. ချိန်းရှယ်ယာ ENB-PU.TO အွန်လိုင်း
70. ချိန်းရှယ်ယာ ENB-PY.TO အွန်လိုင်း
71. ချိန်းရှယ်ယာ EQNR အွန်လိုင်း
72. ချိန်းရှယ်ယာ FB အွန်လိုင်း
Facebook, Inc. 294.66 $ 294.36 $ 294.70 $ 294.61 $ -0.564 % ↓
73. ချိန်းရှယ်ယာ FMXUF အွန်လိုင်း
74. ချိန်းရှယ်ယာ GE အွန်လိုင်း
General Electric Company 90 $ 88.07 $ 91.77 $ 89.90 $ -0.641 % ↓
75. ချိန်းရှယ်ယာ GLAXF အွန်လိုင်း
76. ချိန်းရှယ်ယာ GOOGL အွန်လိုင်း
Alphabet Inc.2582.19 $2579.01 $2582.85 $2579.40 $ -1.95 % ↓
77. ချိန်းရှယ်ယာ GS အွန်လိုင်း
78. ချိန်းရှယ်ယာ GSK.BA အွန်လိုင်း
79. ချိန်းရှယ်ယာ HD အွန်လိုင်း
The Home Depot, Inc. 360.43 $ 353.91 $ 364.12 $ 356.43 $ +0.239 % ↑
80. ချိန်းရှယ်ယာ HDB အွန်လိုင်း
81. ချိန်းရှယ်ယာ HESAF အွန်လိုင်း
82. ချိန်းရှယ်ယာ HMC.BA အွန်လိုင်း
83. ချိန်းရှယ်ယာ HON အွန်လိုင်း
84. ချိန်းရှယ်ယာ HSBC အွန်လိုင်း
85. ချိန်းရှယ်ယာ IBM အွန်လိုင်း
International Business Machines Corporation 133.66 $ 132.08 $ 134.75 $ 132.52 $ +1.33 % ↑
86. ချိန်းရှယ်ယာ IDCBY အွန်လိုင်း
87. ချိန်းရှယ်ယာ IDEXF အွန်လိုင်း
88. ချိန်းရှယ်ယာ INFY အွန်လိုင်း
89. ချိန်းရှယ်ယာ INTC အွန်လိုင်း
Intel Corporation 48.08 $ 48.04 $ 48.10 $ 48.05 $ -3.363 % ↓
90. ချိန်းရှယ်ယာ INTU အွန်လိုင်း
91. ချိန်းရှယ်ယာ IOY.F အွန်လိုင်း
INFOSYS LTD. ADR/1 IR5 19.60 € 19.60 € 19.70 € 19.70 € +2.604 % ↑
92. ချိန်းရှယ်ယာ ISRG အွန်လိုင်း
93. ချိန်းရှယ်ယာ ITKA.F အွန်လိုင်း
ANHEUSER-BUSCH INBEV ADR 55.80 € 55.80 € 57.20 € 57.20 € -1.038 % ↓
94. ချိန်းရှယ်ယာ IVV အွန်လိုင်း
95. ချိန်းရှယ်ယာ JD အွန်လိုင်း
96. ချိန်းရှယ်ယာ JNJ အွန်လိုင်း
97. ချိန်းရှယ်ယာ JPM အွန်လိုင်း
98. ချိန်းရှယ်ယာ KCE-R.BK အွန်လိုင်း
KCE Electronics Public Company Limited 75 ฿ 72.75 ฿ 75 ฿ 72.75 ฿ +3.191 % ↑
99. ချိန်းရှယ်ယာ KO အွန်လိုင်း
The Coca-Cola Company 59.71 $ 59.63 $ 59.71 $ 59.65 $ -0.831 % ↓
100. ချိန်းရှယ်ယာ KYCCF အွန်လိုင်း
101. ချိန်းရှယ်ယာ LIN အွန်လိုင်း
102. ချိန်းရှယ်ယာ LIN.DE အွန်လိုင်း
Linde Aktiengesellschaft 272.05 € 271.35 € 281.50 € 280.90 € -0.302 % ↓
103. ချိန်းရှယ်ယာ LLY အွန်လိုင်း
104. ချိန်းရှယ်ယာ LMT အွန်လိုင်း
105. ချိန်းရှယ်ယာ LOW အွန်လိုင်း
106. ချိန်းရှယ်ယာ LRLCF အွန်လိုင်း
107. ချိန်းရှယ်ယာ LVMUY အွန်လိုင်း
108. ချိန်းရှယ်ယာ MA အွန်လိုင်း
109. ချိန်းရှယ်ယာ MCD အွန်လိုင်း
McDonald's Corporation 253 $ 245.25 $ 252.46 $ 248.74 $ +0.448 % ↑
110. ချိန်းရှယ်ယာ MDLZ အွန်လိုင်း
111. ချိန်းရှယ်ယာ MDT အွန်လိုင်း
112. ချိန်းရှယ်ယာ MKGAF အွန်လိုင်း
113. ချိန်းရှယ်ယာ MMM အွန်လိုင်း
114. ချိန်းရှယ်ယာ MO အွန်လိုင်း
115. ချိန်းရှယ်ယာ MQBKY အွန်လိုင်း
116. ချိန်းရှယ်ယာ MRK အွန်လိုင်း
117. ချိန်းရှယ်ယာ MSFT အွန်လိုင်း
Microsoft Corporation 300.29 $ 299.54 $ 300.33 $ 299.79 $ -0.899 % ↓
118. ချိန်းရှယ်ယာ MU အွန်လိုင်း
119. ချိန်းရှယ်ယာ NEE အွန်လိုင်း
120. ချိန်းရှယ်ယာ NFLX အွန်လိုင်း
Netflix, Inc. 388.06 $ 386.32 $ 388.12 $ 386.39 $ -0.158 % ↓
121. ချိန်းရှယ်ယာ NGG.BA အွန်လိုင်း
122. ချိန်းရှယ်ယာ NKE အွန်လိုင်း
123. ချိန်းရှယ်ယာ NNDIF အွန်လိုင်း
124. ချိန်းရှယ်ယာ NOW အွန်လိုင်း
ServiceNow, Inc. 553.53 $ 518.14 $ 556.99 $ 528.69 $ -7.727 % ↓
125. ချိန်းရှယ်ယာ NPPXF အွန်လိုင်း
126. ချိန်းရှယ်ယာ NSRGF အွန်လိုင်း
Nestlé S.A. 128.46 $ 125.62 $ 128.48 $ 127.10 $ +0.514 % ↑
127. ချိန်းရှယ်ယာ NVDA အွန်လိုင်း
NVIDIA Corporation 219.57 $ 219.29 $ 219.65 $ 219.30 $ -7.143 % ↓
128. ချိန်းရှယ်ယာ NVO အွန်လိုင်း
Novo Nordisk A/S 95.47 $ 95.02 $ 96.69 $ 95.44 $ -2.393 % ↓
129. ချိန်းရှယ်ယာ NVS အွန်လိုင်း
Novartis AG 84.82 $ 84.65 $ 85.93 $ 85.14 $ -1.046 % ↓
130. ချိန်းရှယ်ယာ NVS.BA အွန်လိုင်း
131. ချိန်းရှယ်ယာ OGZD.IL အွန်လိုင်း
Gazprom Level 1 Ads 7.56 $ 7.56 $ 8.52 $ 8.40 $ -8.815 % ↓
132. ချိန်းရှယ်ယာ OGZPY အွန်လိုင်း
Gazprom 8.29 $ 8.27 $ 8.29 $ 8.27 $ -0.481 % ↓
133. ချိန်းရှယ်ယာ ORCL အွန်လိုင်း
Oracle Corporation 80.11 $ 79.20 $ 81.15 $ 79.78 $ -0.238 % ↓
134. ချိန်းရှယ်ယာ PCCYF အွန်လိုင်း
135. ချိန်းရှယ်ယာ PEP အွန်လိုင်း
PepsiCo, Inc. 169.48 $ 169.31 $ 169.48 $ 169.37 $ -0.988 % ↓
136. ချိန်းရှယ်ယာ PFE အွန်လိုင်း
Pfizer Inc. 53.39 $ 53.31 $ 53.58 $ 53.37 $ +0.452 % ↑
137. ချိန်းရှယ်ယာ PG အွန်လိုင်း
The Procter & Gamble Company 158.73 $ 158.58 $ 161.35 $ 159.13 $ -0.612 % ↓
138. ချိန်းရှယ်ယာ PLD အွန်လိုင်း
Prologis, Inc. 151.85 $ 147.59 $ 154.15 $ 148.61 $ +2.137 % ↑
139. ချိန်းရှယ်ယာ PM အွန်လိုင်း
Philip Morris International Inc. 102.10 $ 101.41 $ 103.30 $ 102.25 $ -0.844 % ↓
140. ချိန်းရှယ်ယာ PNC အွန်လိုင်း
The PNC Financial Services Group, Inc. 208.67 $ 202.68 $ 210.42 $ 204.96 $ +0.515 % ↑
141. ချိန်းရှယ်ယာ PNGAY အွန်လိုင်း
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 15.52 $ 15.52 $ 16 $ 15.78 $ +2.401 % ↑
142. ချိန်းရှယ်ယာ PPRUF အွန်လိုင်း
Kering SA 748.20 $ 715.08 $ 748.20 $ 715.08 $ +6.227 % ↑
143. ချိန်းရှယ်ယာ PYPL အွန်လိုင်း
PayPal Holdings, Inc. 159.43 $ 156.54 $ 162.55 $ 158.11 $ -0.71 % ↓
144. ချိန်းရှယ်ယာ QCOM အွန်လိုင်း
QUALCOMM Incorporated 169.31 $ 160.63 $ 171.45 $ 161.20 $ +3.732 % ↑
145. ချိန်းရှယ်ယာ QQQ အွန်လိုင်း
Invesco QQQ Trust 349.40 $ 340.06 $ 351.26 $ 341.10 $ +1.028 % ↑
146. ချိန်းရှယ်ယာ RHHBF အွန်လိုင်း
147. ချိန်းရှယ်ယာ RLI.F အွန်လိုင်း
Reliance Industries Limited 56.40 € 55.40 € 56.40 € 56.40 € -1.053 % ↓
148. ချိန်းရှယ်ယာ RTNTF အွန်လိုင်း
149. ချိန်းရှယ်ယာ RTPPF အွန်လိုင်း
Rio Tinto plc 75.57 $ 74.93 $ 75.98 $ 74.93 $ +0.991 % ↑
150. ချိန်းရှယ်ယာ RY-PJ.TO အွန်လိုင်း
151. ချိန်းရှယ်ယာ RY-PM.TO အွန်လိုင်း
152. ချိန်းရှယ်ယာ RY-PT အွန်လိုင်း
153. ချိန်းရှယ်ယာ RY-PZ.TO အွန်လိုင်း
154. ချိန်းရှယ်ယာ RYDAF အွန်လိုင်း
Royal Dutch Shell plc 25.90 $ 25.50 $ 26.13 $ 25.50 $ +0.473 % ↑
155. ချိန်းရှယ်ယာ SAP အွန်လိုင်း
SAP SE 123.92 $ 122.09 $ 125.20 $ 122.38 $ +8.802 % ↑
156. ချိန်းရှယ်ယာ SBGSF အွန်လိုင်း
Schneider Electric S.E. 171.30 $ 166.33 $ 171.30 $ 168.33 $ +1.321 % ↑
157. ချိန်းရှယ်ယာ SBUX အွန်လိုင်း
Starbucks Corporation 96.62 $ 95.07 $ 97.17 $ 95.32 $ +0.274 % ↑
158. ချိန်းရှယ်ယာ SCHW အွန်လိုင်း
The Charles Schwab Corporation 91.01 $ 89.05 $ 92.90 $ 89.70 $ +0.347 % ↑
159. ချိန်းရှယ်ယာ SHOP အွန်လိုင်း
Shopify Inc. 904.69 $ 813.17 $ 904.99 $ 815.76 $ +6.971 % ↑
160. ချိန်းရှယ်ယာ SMAWF အွန်လိုင်း
Siemens Aktiengesellschaft 156.50 $ 154.95 $ 156.69 $ 156.40 $ +1.853 % ↑
161. ချိန်းရှယ်ယာ SMSN.IL အွန်လိုင်း
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 1 494 $ 1 486.50 $ 1 507 $ 1 502 $ +3.266 % ↑
162. ချိန်းရှယ်ယာ SNEJF အွန်လိုင်း
Sony Corporation 103.64 $ 103.64 $ 103.64 $ 103.64 $ +0.739 % ↑
163. ချိန်းရှယ်ယာ SNYNF အွန်လိုင်း
164. ချိန်းရှယ်ယာ SPGI အွန်လိုင်း
S&P Global Inc. 403.72 $ 393.09 $ 410.05 $ 395.08 $ +0.627 % ↑
165. ချိန်းရှယ်ယာ SPY အွန်လိုင်း
SPDR S&P 500 ETF 438.26 $ 429.45 $ 441.59 $ 431.24 $ +0.499 % ↑
166. ချိန်းရှယ်ယာ SSU.SG အွန်လိုင်း
Samsung Electronics Co., Ltd. 1 360 € 1 360 € 1 360 € 1 360 € -2.857 % ↓
167. ချိန်းရှယ်ယာ SYK အွန်လိုင်း
Stryker Corporation 249.82 $ 243.43 $ 250.82 $ 245.33 $ +1.209 % ↑
168. ချိန်းရှယ်ယာ T အွန်လိုင်း
AT&T Inc. 24.12 $ 24.11 $ 24.14 $ 24.11 $ +0.062 % ↑
169. ချိန်းရှယ်ယာ TBB အွန်လိုင်း
AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 25.46 $ 25.31 $ 25.51 $ 25.36 $ +0.277 % ↑
170. ချိန်းရှယ်ယာ TCS.BO အွန်လိုင်း
Tata Consultancy Services Limited3659 Rs3650 Rs3729 Rs3710 Rs -1.589 % ↓
171. ချိန်းရှယ်ယာ TCTZF အွန်လိုင်း
Tencent Holdings Limited 61.60 $ 59 $ 61.60 $ 59.41 $ +0.189 % ↑
172. ချိန်းရှယ်ယာ TD အွန်လိုင်း
The Toronto-Dominion Bank 79.66 $ 78.57 $ 80.27 $ 78.95 $ +0.127 % ↑
173. ချိန်းရှယ်ယာ TGT အွန်လိုင်း
Target Corporation 215.33 $ 211.39 $ 217.28 $ 212.18 $ -0.221 % ↓
174. ချိန်းရှယ်ယာ TL0.DE အွန်လိုင်း
Tesla Motors, Inc. 822 € 771.80 € 851.30 € 781.80 € +8.193 % ↑
175. ချိန်းရှယ်ယာ TM အွန်လိုင်း
Toyota Motor Corporation 192.47 $ 189.29 $ 193.54 $ 189.96 $ +2.266 % ↑
176. ချိန်းရှယ်ယာ TM.BA အွန်လိုင်း
TOYOTA MOTOR CORP 8 990 $ 8 898 $ 8 990 $ 8 913 $ +0.986 % ↑
177. ချိန်းရှယ်ယာ TMO အွန်လိုင်း
Thermo Fisher Scientific Inc. 568.58 $ 552.81 $ 571.41 $ 553.74 $ +1.682 % ↑
178. ချိန်းရှယ်ယာ TMUS အွန်လိုင်း
T-Mobile US, Inc. 103.92 $ 103.77 $ 107.75 $ 106.03 $ -1.678 % ↓
179. ချိန်းရှယ်ယာ TRAUF အွန်လိုင်း
180. ချိန်းရှယ်ယာ TSLA အွန်လိုင်း
Tesla, Inc. 831.57 $ 829 $ 831.60 $ 829.33 $ -10.207 % ↓
181. ချိန်းရှယ်ယာ TSM အွန်လိုင်း
182. ချိန်းရှယ်ယာ TSM.BA အွန်လိုင်း
TAIWAN SEMICON MAN 85 900 $ 83 177 $ 86 219 $ 83 177 $ +1.782 % ↑
183. ချိန်းရှယ်ယာ TTFNF အွန်လိုင်း
184. ချိန်းရှယ်ယာ TXN အွန်လိုင်း
Texas Instruments Incorporated 180.90 $ 173.10 $ 181.02 $ 174.81 $ +2.055 % ↑
185. ချိန်းရှယ်ယာ UNA.AS အွန်လိုင်း
186. ချိန်းရှယ်ယာ UNH အွန်လိုင်း
187. ချိန်းရှယ်ယာ UNLYF အွန်လိုင်း
188. ချိန်းရှယ်ယာ UNP အွန်လိုင်း
189. ချိန်းရှယ်ယာ UPS အွန်လိုင်း
190. ချိန်းရှယ်ယာ USB အွန်လိုင်း
191. ချိန်းရှယ်ယာ USB-PA အွန်လိုင်း
192. ချိန်းရှယ်ယာ V အွန်လိုင်း
Visa Inc. 209.50 $ 205.85 $ 210.96 $ 206.15 $ -0.136 % ↓
193. ချိန်းရှယ်ယာ VB အွန်လိုင်း
194. ချိန်းရှယ်ယာ VLKAF အွန်လိုင်း
Volkswagen AG 286.38 $ 284 $ 292 $ 284.25 $ +0.194 % ↑
195. ချိန်းရှယ်ယာ VTI အွန်လိုင်း
196. ချိန်းရှယ်ယာ VZ အွန်လိုင်း
Verizon Communications Inc. 50.91 $ 50.81 $ 52.07 $ 51.19 $ -0.331 % ↓
197. ချိန်းရှယ်ယာ WFC-PR အွန်လိုင်း
198. ချိန်းရှယ်ယာ WMT အွန်လိုင်း
Walmart Inc. 135.81 $ 135.78 $ 135.96 $ 135.84 $ -0.868 % ↓
199. ချိန်းရှယ်ယာ XOM အွန်လိုင်း
200. ချိန်းရှယ်ယာ ZTS အွန်လိုင်း
အွန်လိုင်းစတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်းများ - allstockstoday.com ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏ကဏ္ section၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာ့ဖလှယ်မှုတွင်ကုမ္ပဏီများ၏စတော့များကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီကုန်သွယ်မှုကိုပြသသည်။
အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ရာနေ့တွင်အမြင့်ဆုံးအတက်အကျပြောင်းလဲခြင်းအပြင်၊ စတော့စျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲကိုတစ်နေ့တာအတွက်၊ တစ်နေ့၊ ယနေ့အတွက်တွက်ချက်သည်။
ကုမ္ပဏီတစ်ခုချင်းစီ၏စတော့စျေးနှုန်းကိုအဓိကညွှန်းကိန်းငါးခုဖြင့်ဖော်ပြသည် - ကုန်သွယ်မှုစတင်ချိန်တွင်နှုန်း၊ ကုန်သွယ်မှုအဆုံးတွင်စတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်း၊ ယနေ့ကုန်သွယ်နေစဉ်ကုမ္ပဏီ၏စတော့စျေး၏အမြင့်ဆုံးနှင့်နိမ့်ဆုံးတန်ဖိုးနှင့်နောက်ဆုံးလက္ခဏာ - မျက်မှောက်ခေတ်ကုန်သွယ်ရေးနေ့တွင်ကုမ္ပဏီ၏စတော့စျေးနှုန်းပြောင်းလဲမှု၊
ယနေ့စတော့အိတ်ချိန်းတွင်အရောင်းအဝယ်ဖွင့်ပွဲ၌အစုရှယ်ယာဈေးနှုန်းသည်ပထမဆုံးစတင်သောစျေးနှုန်းဖြစ်သည်။ ဤဈေးနှုန်း၏တန်ဖိုးကိုဤကုမ္ပဏီ၏နောက်ဆုံးလေလံပွဲမှဆုံးဖြတ်သည်။ နောက်လာမည့်လေလံတွင်ကုမ္ပဏီ၏ရှယ်ယာများ၏တန်ဖိုးကိုပေးသောဤလဲလှယ်လေလံများသည်။
ယနေ့စတော့အိတ်ချိန်းတွင်ကုန်သွယ်မှုပြီးဆုံးချိန်တွင်စတော့စျေးနှုန်းသည်ယနေ့ကုန်သွယ်ရေးနေ့တွင်စတော့အိတ်ချိန်းတွင်နောက်ဆုံးကုန်သွယ်ရေးအရောင်းအ ၀ ယ်ဖြစ်သည်။ ဤသည်စျေးနှုန်းကုမ္ပဏီ၏စတော့ရှယ်ယာစျေးနှုန်းအပေါ်ကုန်သွယ်ပိတ်လိုက်နှင့်မနက်ဖြန်များအတွက်စတော့ရှယ်ယာများ၏စတင်စျေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။